Shina: Mpiserasera nogadraina noho ny “fampielezana tsaho” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2019 8:02 GMT
Nitranga tao Hangzhou tamin'ny 7 Mey 2009 ny lozam-pifamoivoizana, izay nitarika fahafatesana tovolahy iray ary fantatra fa i Hu Bin, tovolahy manana fianakaviana manankarena ilay mpamily. Nahasarika ny sain'ny olona manerana an'i Shina izany satria tsy mitovy amin'ny fitantaran'ireo nanatri-maso sy ny porofo mikasika ny zava-misy ny tatitra nataon'ny polisy momba ny hafainganam-pandehan'ilay fiara. Matetika ihany koa tafala amin'ireo fiampangana heloka bevava ireo mpamily fiara nahafaty olona noho ny kolikoly fanaon'ny polisy. Amin'ity tranga manokana ity, dia tapa-kevitra ny hiasa ho mpanaramaso ireo mpiserasera amin'ny alalan'ny fanadihadiana ny fiavian'ny mpamily, ny hafainganam-pandehan'ny fiara ary manaraka ny antsipiriany rehetra momba ny tatitra ataon'ny polisy sy ny raharaham-pitsarana.
Tamin'ny volana Jolay, dia hitan'ny fitsarana fa meloka i Hu ka nanameloka azy higadra 3 taona an-tranomaizina. Na izany aza, maro ireo mpiserasera nihevitra fa tsy i Hu Bin tena izy ilay olona nanatrika ny fitsarana. Nandinika ny horonantsary tamin'ny alin'ny lozam-pifamoivoizana izy ireo ary nampitaha ilay olona tamin'ny horonantsary sy tao amin'ny fitsarana. Nitaky fitiliana ADN ny sasany tamin'izy ireo mba hanaporofoana ny mari-panondroana an'i Hu.
Raha tokony hanome porofo ny maha Hu Bin an'ilay olona, dia namoaka lahatsary ahitana an'i Hu niresaka mivantana tamin'ireo mpampianatra sy mpitati-baovao momba ny alahelony mahakasika ilay lozam-pifamoivoizana ny governemantan'i Hangzhou. Ary nanomboka nandray fepetra tamin'ireo mpiserasera izay “nanely tsaho” ny polisy.
Tamin'ny 24 Aogositra, nitatitra ny vaovao Xinhua fa nosamborin'ny polisin'i Hubei i Xiong Zhongjun izay nibilaogy momba ilay lozam-pifamoivoizana sy nanontany ny mombamomba an'i Hu ny 20 Jolay hatramin'ny 2 Aogositra. Nanambara ny tatitra fa nanakorontana ny filaminam-bahoaka i Xiong tamin'ny fampielezana tsaho ary nitàna azy nandritra ny 10 andro ny polisin'ny Hubei araka ny fitsipika misy ao amin'ny polisy.
Raha maro ireo bilaogera sy mpiserasera nanoratra momba ny raharaha, nanapa-kevitra ny hiteny any amin'ny polisy ilay bilaogera Zhang Hongfeng sy ireo bilaogera roa hafa Cheng Dalin sy Yao Xiaoyuan, izay manan-danja kokoa noho i Xiong. Manangona ny lisitr'ireo bilaogera izay nanapa-kevitra ny hiteny any amin'ny polisy amin'ilay raharaha i Zhang.
Mazava loatra, fa fihetsika fiarovana manoloana ny polisy ao Hangzhou izany, satria nahatezitra ny vahoaka ny tatitra voalohany momba ny hafainganam-pandehan'ilay fiara ka iza no nanakorontana ny fiarovana sy ny filaminam-bahoaka? Ny polisy sa ny bilaogera? Hoy i Zhang Hongfeng nanontany.